Ikhuza eyokuthathwa komhlaba ngendluzula imeya | News24
Ikhuza eyokuthathwa komhlaba ngendluzula imeya
Kokstad - Imeya yaseKokstad eningizimu yesifundazwe saKwaZulu-Natal, uBheki Mtolo usebenzise ithuba lokucobelelana nosomabhizinisi bendawo ngokuthi akhuze eyokuthathwa komhlaba ngendluzula.
Ukusho lokhu ngoba ethi lokho kunomthelela omubi emnothweni wakuleli futhi kuvimba abatshali zimali bangafisi kumbe bangacabangi ukutshala imali yabo elizweni ekulokhu kubikwa izigameko zodlame ngalo.
uMtolo ubekhuluma emcimbini wosomabhizinisi eKokstad obuhlanganisa neminyango kahulumeni lapho bebeyocobelelana ngezindlela zokugqugquzela nokuxhasa amabhizinisi asakhula ukuze nawo akwazi ukusebenzisa amathuba kahulumeni akhule kukhandlwe namathuba emisebenzi.
Ethula inkulumo yakhe emcimbini obusehholo elise dolobheni uMtolo ukubeke kwacaca ukuthi uhulumeni akasenayo imali yingakho beqinisa ubudlelwane nezinkampani ezizimele ngenhloso yokuthi zikwazi ukutshala imali ezindaweni ezehlukene kuvuleke amathuba emisebenzi.
OLUNYE UDABA:Umphakathi uvimba imizamo yokuxosha imeya
“Uma ngingakutshela iqiniso nje ngendlela imisebenzi engekho ngayo thina siwu mkhandlu sagcina ukuqasha kakhulu ngonyaka ka 2012. Yingakho sigqugquzela intsha ukuthi ifunde ithi ingena kwezamathenda kodwa ibe iwazi umnyango wesikole ukuze kuthi uma kungahambi kahle kwezamathenda ikwazi ukuthintitha izitifiketi iyofuna imisebenzi” kusho uMtolo.
Uthe intsha ayihlukane nokuhehwa abanye bamathenda abahamba ngezimoto zikanokusho bagcine sebeshiya isikole ngoba bejahe ukwenza amathenda nabo bahambe ngezimoto kepha abafunde kuqala bawenze kahle amathenda befundile.
Uphinde wathi indaba yomhlaba ibucayi futhi idinga ucwaningo olunzulu ngoba abantu bahaje ukuthatha umhlaba nezimayini kodwa babe behlulwa amadolobha abo amancane.
“Uthole ukuthi edolobheni amarobhothi kawasebenzi kodwa abantu balo bayalwa bafuna ukungena emnothweni wezimayini ngale kokuthi behlulwa ngisho ukubamba isikhathi kodwa babe bazi kahle ukuthi kwezamabhizinisi isikhathi yimali” kusho uMtolo.
Nokho uthi bayazama ukuhlangabezana nosomabhizinisi abancane njengoba kuwumthwalo wabo ukuthi bawaxhase.
Le ngqungquthela ebihanjelwe osomabhizinisi abamhlophe nabamnyama ibenesasasa njengoba bevulelwe amathuba eminyangweni eyehlukene yokuthi bathole uxhaso.